Iche iche collection i Anundgård.
Idebe ọcha, mma n'anya na free of tụkọtara doro anya – karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ebi n'etiti uwa. Na Holm nke a n'efu nkewa na chọọchị ahụ na mkpofu ụgbọala na-abịa bụla ọzọ izu.
Scrap metal anakọtara site Holms Sportklubb ọ bụla metal onyinye-erite uru club na Holm district (gụkwuo si oke maka 2012).
Ị onwe gị pụọ na mkpofu, ọ bụ ezigbo Circuit Lopp Park na Blåberget ma ọ bụ na obere mkpa ize ndụ n'efu center na Bydalen, Sundsvall. Ke adianade do, obodo / aro collection njegharị Holm dị ka n'okpuru.
– Avfallstaxa 2013 – Full price list maka dị iche iche nke mkpofu, slam m.m.
– Ịtụ online a aja aja mkpofu ahịhịa na-azọpụta ọ bụla n'afọ. GỤKWUO n'ihu ala.
– Olee ota mgbọ wdg? Ebe i nwere ike ịchọta otú dị iche iche ihe na-ota.
– Mera ọmụma, broshuọ na nduzi M.M.. on Reko Sundsvall si website.
– New nri n'efu akpa nwere ike ekemende na Lidén ICA ma ọ bụ ICA Kovland.
– Iche iche collection of Christmas oge.
Timetables NA ỌNỌDỤ IHE ekpofu Nchịkọta IN Holm
Ezinaụlọ n'efu na nri n'efu anakọtara iberibe izu dị ka ndị a
ụbọchị Mọnde: Kväcklingen, Västbyn, Vike, Loviken, Sandnäset, Sunnansjö.
Thursdays: Anundgård, Östbyn, Österström, nchepụta.
Nsị ezumike emee n'oge May-September.
(Isiokwu na-eme ka alterations.)
Avfallstaxa (2014) isi iyi: Rekos Price List
1. Villa N'ulo-akwụ a ofu kwa afọ ego nke 870 kr.
2. Igbapu ụgwọ 6,19kr / 140 l ma ọ bụ 6,68kr / 190 l. The aja aja biini nwere dịghị nsị ego.
3. ibu ego 3,00 kr / n'arọ ma ọ bụ 0,90 SEK / n'arọ ma ọ bụrụ na i nwere a mkpa aja aja na idozi ha nri n'efu.
ịzọpụta banyere 400-700 kr kwa afọ
Ọnụ ala nweta ma ọ bụrụ na ị na ịtụ a aja aja mkpa, ma ka nwere onwe ha compost nri. Mgbe ahụ price kwa kilo 0,90 SEK / n'arọ maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ biini na nri n'efu aghọ free compost.
Ịtụ mkpa kpọmkwem na-azọpụta ego! Olee kewapụta n'efu collection aja aja gbọmgbọm swill.
atụ: naanị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ 190 l mkpa (20kg / tömn. nke 5 n'arọ nri n'efu, ọ bụla ọzọ n'usoro.)
Na a mkpa aja aja kama na-aghọ na-eri 1455 na ụlọ ọrụ nwere a compost-abụ ụgwọ bụ 1345 kr (ihe atụ nke 2012 afọ ahịa).
Ịgụ na gị na-eri nke Holm district si Waste mgbako (na-achọ Excel).
Barntaxa: Ọ bụrụ na ị nwere na-amụ ije, n'okpuru 4 afọ, amị abụọ n'aka nappies M.M.. i nwere ike na-na-dị ọnụ ala karịa tarifu ebe a.
Collection of ọcha scrap metal
Zọpụta n'ụlọ n'oge afọ na-edo a mmiri na-enye nkwado maka Holms SK!
Oge / ebe: Holm Vallen, i maj – nso ka oge na ụbọchị mara ọkwa na Holmbygden.se nso ugbu a ụbọchị.
Collection of keukwu n'efu (-ahụ ugbu a na-oge na-agụ ihe)
N'okporo ụzọ, a izu n'oge opupu ihe ubi na otu na mgbụsị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ike na-agba ọsọ gị keukwu n'efu, i nwere ike mgbe niile-esi ha ebudatara maka ego. Ring 020-21 19 19.
Nke a ga-ebudatara:
– mwube n'efu
– oche, na ma ọ bụ na-enweghị rim
– Hazardous n'efu (ọgwụ)
– Bulbs / oriọna / kọmpat fluorescent bulbs
mobile imegharị ihe maka iji (GỤKWUO na-ahụ mgbe a ga-afọ)
Ìgwè ihe ekpofu, ụlọ n'efu, ubi n'efu, ize ndụ n'efu na ihe imegharị ihe maka iji via Erikshjälpen Nke abụọ Hand ẹmende site Reko na a mobile imegharị ihe maka iji center (AVC) na May.
ize ndụ n'efu (GỤKWUO na-ahụ mgbe collection bụ maka ize ndụ n'efu afọ a)
Emebi nke ikpe, ma e wezụga n'ihi na mobile imegharị ihe maka iji center nwekwara hapụrụ collection na otu ụbọchị na ọdịda.
Batteriholk, bụ mgbe na n'efu sorting m Anundgård.
Environmental ojii maka ize ndụ n'efu bụkwa na gas ojii na Lidén.
Collection of latrine (gụkwuo)
Monday ụtụtụ izu: 19, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40 (2014).
Nịm gị stuffed mkpa anya n'oge ọ bụla arịa (isi awọ) ma ọ bụ mgbe a akpa obi.
Collection of sludge (gụkwuo)
Sjöändan-Holm-mkpịsị aka: Aug-sept (2014)
Sjöändan-Ase tinyere ụzọ 320: June-Sept (2014)
Collection nke ubi n'efu
Garden n'efu na nnukwu akpa (800 liter) anakọtara na collection tours na a na-eri nke 250:- gụnyere VAT. The price na-agụnye ghota-elu na iga imegharị ihe maka iji. The IBC pụrụ ịzụta na Kretsloppsparken ma ọ bụ ize ndụ n'efu center na Bydalen. Collection na-ewe ebe mmiri na na n'oge mgbụsị akwụkwọ (Mgbagwoju ebe a). OBS! The akpa ga-etinye n'ime atọ mita si n'akụkụ ụzọ. Ị nwere ike mgbe niile na-ahapụ ubi n'efu n'efu na anyị imegharị ihe maka iji emmepe.
scrap Cars, Mee- na demolition, Companies n'efu, Ensilageplast
gỤKWUO ọchịchị website ebe a.
Olee egweri gị
Sundsvall Municipality, Waste na imegharị ihe maka iji
Reko saịtị na oge.